Ngwọta maka nchekwa nchekwa Firefox? | Site na Linux
Ngwọta maka nchekwa nchekwa Firefox?
Firefox a na-ewere na ọ bụ jiri nwayọ ma rie ọtụtụ ebe nchekwa. Agbanyeghị, eziokwu bụ na ọ na -eri obere nchekwa karịa Chrome / Chromium. Agbanyeghị, mgbe ị na-eji ihe nchọgharị ahụ, ọ bụ eziokwu na Firefox malitere "iri" RAM anyị, ọ yịghị ka ọ ga-agbadata mgbe anyị mechiri peeji ndị mepere emepe. O doro anya na, mmepe Mozilla dị hụrụ usọbọ.
Mgbe ogologo oge gbalịrị idozi nsogbu a, Mozilla Foundation kwusiri ike na nkwupụta ụnyaahụ na ha achọtala nsogbu ahụ, nke ha ga-edozi Firefox 7.
Nke a bụ otu n'ime nsogbu ndị ọrụ kachasị kọwaa yana, gịnị ma ị kwuo ya, ihe kachasị mkpa Achilles ikiri ụkwụ nke Firefox.
Ule na Aurora
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọchịchọ m ịnwale mmelite a (dị ịrịba ama ma na-eche ogologo oge) siri ike karịa m. Ule m gụnyere imeghe taabụ 20 na Firefox 5 na Firefox 7.0a2.
N'ezie, oriri nke ebe nchekwa RAM belatara nke ukwuu, ebe Firefox 5 riri 637.680KB (638MB), Firefox 7.0a2 riri 444.252KB (444MB), ya bụ, nchekwa bụ 193MB, nke na-abụghị obere ma na-anọchite anya nchekwa nke 30 % na oriri nchekwa (dị ka Mozilla kwere nkwa). Emechara m chọpụta na mepee taabụ ọzọ, nchekwa na nchekwa nchekwa na-abawanye.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ule ahụ n'onwe gị, ịnwere ike ibudata [Firefox 7.0a2 si ebe a,]. Versiondị a abụghị naanị na-ebelata oriri nchekwa, kamakwa ọ na - eme ka oge mmalite Firefox dị mma, na - eme ka ọrụ mmekọrịta dị mma (ibe edokọbara na okwuntughe ga - arụkọ ọrụ ọnụ ozigbo) ma mechaa kwalite mmelite na nsụgharị ederede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ngwọta maka nchekwa nchekwa Firefox?
Patrick Underthehill dijo
Na 8GiB nke RAM…. Ibidogharịa nchọgharị kwa ụbọchị 5 ma ọ bụ 6 zuru ezu. Ngwa mgbakwunye-akpa ... aka flash ngwa mgbakwunye bụ nke na-enye dọrọ.
Zaghachi Patricio Underthehill
ka anyi nwaa….
Enrique JP Valenzuela nke V. dijo
ezi Ama, ma m ga-eche na anụ version nke firefox 7, chere!
Zaghachi Enrique JP Valenzuela V.
na oke oriri nchekwa na-emekwa na windos?
Naanị ịmata ihe, anaghị m agbanwe opera m na Linux maka ihe ọ bụla 🙂
Mmasị, olile anya ma dozie nsogbu a nke oriri nchekwa. Ugbu a, na-emeghe naanị taabụ 3, enwere m Firefox na-eri 236 MB, ntakịrị oke. N'agbanyeghị nke ahụ, anaghị m agbanye Firefox n'efu.
Ezigbo nhọrọ… mana ọ masịrị m ibi na mmiri nke ebili mmiri ahụ. 🙂
Ana m ada maka Chromium, mana m na-agaghachi na Firefox niile dị ike.
[Nkebi nke abụọ] LMDE na omimi: Mmelite sistemụ.
Ka anyị zute Synaptic na LMDE <° Linux